Maamulaha Virt-ka iyo Virsh: Maamulka fog ee loo maro shabakadaha SSH - SMB | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan rajeyneynaa inaad raacday maqaalladayada illaa iyo hadda la daabacay, kuwaas oo ah:
Si sax ah boostada Qemu-Kvm + Maamulaha Virt-ka ee Debian - Shabakadaha Kombiyuutarada ee SMEsWaxaan caddaynaynaa, oo leh hal goob shaqo oo leh Virt-Manager oo rakibay, waxaan si fog u maamuli karnaa inta ugu badan ee kormeerayaasha ah sida loogu baahdo. Si kale haddii loo dhigo, server-yada u heellan wax-u-qabashada, qasab ma aha in la rakibo Desktop ama jawi garaafyo kale leh.
Server Remote waa in loo sameeyaa sida ku cad Rakibaadda Goobta Shaqada - Shabakadaha Kombiyuutarada ee SMEs, ama lagu hagayo qodobbada soo socda oo aan kaga hadli doonno qaybinta kale sida CentOS iyo laga yaabee Furan, hadhowna waxay noqon doontaa oo keliya lagama maarmaan in lagu rakibo taageero hufan mid kasta oo iyaga ka mid ah. Qaab wax ku ool ah, adeegyadan, ka dib nadiifin nadiif ah oo ah Nidaamka Howlgalka ee Saldhigga iyo cusbooneysiinta xirmooyinka la rakibay iyadoo la raacayo keydadka la heli karo, waxaa kaliya loo baahan doonaa in la rakibo xirmooyinka qemu-kvm, libvirt-bin y buundooyinka-maacuunta, ama xirmo kale oo gaar u ah qaybinta kasta, taas oo aan macnaheedu ahayn haddii aan u baahanno barnaamijyo kale, ma rakibno.
1 Remvis hypervisor «jessie»
1.1 Waxaan diyaarinaa hypervisor «Jessie»
2 Waxaan ku maareynaa Jessie iyada oo loo marayo Virt-Manager iyo Virsh, iyada oo loo marayo SSH
2.1 Talaabo talaabo ah oo leh sawiro la soo dejiyey
2.2 Waxaan bedelnaa shabakadda "default" ee shebekadda sare ee fog iyadoo la adeegsanayo virsh
2.3 Tallaabo Tallaabo Tallaabo oo wata sawirro la soo dejiyey
3 Gaarsiinta xigta
Remvis hypervisor «jessie»
Sifooyinka server-kan waa kuwa soo socda:
Magaca Domain: fromlinux.fan
Magaca kooxda: jessie
Cinwaanka IP: 10.10.10.5
Disk 2 dhibic buur: / guriga / vms
Isticmaalaha caadiga ah: buzz
Magaca buuxa ee isticmaalaha: Debian First OS Buzz
Waxaan diyaarinaa hypervisor «Jessie»
Tan iyo markii aynaan haysan a DNS shabakadda, waa inaan sii wadnaa adeegsiga IP-yada. Wadada ssh ama si toos ah qalabka kombiyuutarka, waxaan fulinaa amarrada soo socda:
buzz@10.10.10.5 sirta ah:
# Xaqiijin: LoginGraceTime 120 # PermitRootLogin bilaa-eray sir ah
buzz @ jessie: ~ $ sudo service ssh dib u bilaw
buzz @ jessie: ~ $ sudo adeegga ssh status
Ssh.service - OpenBSD Secure Shell server Loading: load (/lib/systemd/system/ssh.service; firfircoonaan) Firfircoon: firfircoon (socda) ilaa Sun 2016-12-11 12:15:24 EST; 3s kahor Main PID: 14960 (sshd)
buzz @ jessie: ~ $ sudo aptitude rakibi qemu-kvm libvirt-bin
Kadib markaan dhameyno howlaha kor ku xusan, waxaan fureynaa Maamulaha Virt-ka goobta shaqadayada, waxaanan sii wadaynaa maaraynta qalabka 'jessie' ee fog.
Si maqaalkaan looga dhigo mid ficil ah, waxaan soo buuxinay dhamaan sawirada si aan u soo dejino, waxaana ku siineynaa xiriirka hoose, si marka ay u aqrinayaan sharaxaadda "Talaabo Talaabo", ay u arki karaan sawirada gudaha Sawirada ayaa doorbiday. Waxaan aaminsanahay in tani ay ka raaxo badan tahay. Waxaan sameyneynaa sida aan u qoreyno maqaalka.
Soo dejiso sawirrada «Tallaabo Tallaabo» (961.1 kB).
Waxaan ku maareynaa Jessie iyada oo loo marayo Virt-Manager iyo Virsh, iyada oo loo marayo SSH
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ku sameyno annaga Kundarbetsplats, waa in lagu rakibo barnaamij jaantus ah oo lagu maareeyo furayaasha of the isticmaalayaasha muxuu inaga codsadaa libvirt fog. Waa lagama maarmaan in, in meel fog lagala xiriiro, jinka libvirtd si sax ah ayuu u socdaa, iyo in isticmaalaha la doortay iska leh kooxda libvirt ee mashiinka fog, ama taasi waa adeegsade laftiisa xidid.
p ksshaskpass - si is-dhexgal leh u adeegsada dadka isticmaala eray-celinta loogu talagalay ssh-add p razorqt-openssh-askpass - Qeybta kaaliyaha OpenSSH ee deegaanka Razor-qt desktop p -fullscreen - Gnome2 hoostiisa, wuxuu weydiisanayaa isticmaalaha ereybixin loogu talagalay ssh-add p ssh-askpass-gnome - barnaamijka is-dhexgalka X si loogu kiciyo isticmaaleyaasha erey-bixinta loogu talagalay ssh-add
Waxaan dooranay ssh-askar-gnome, maxaa yeelay waxaan rakibnay MATE-Desktop.
buzz @ sysadmin: ~ $ sudo karti u leh rakib ssh-askpass-gnome
Si looga fogaado dhibaatooyinka, iyo raacitaanka talobixinta Virt-Manager lafteeda, taas oo si toos ah u tilmaamaysa isticmaalaha xidid in la isku xiro, waa sababta aan u oggolaano helitaanka xidid, via ssh, markii aan diyaarinay Jessie hypervisor. Ogsoonow in aanaan xubin ka noqon kooxda libvirt isticmaalaha caadiga ah buzz.
Asal ahaan, si aan meel fog uga maamulno hypervisor-ka iyo mashiinada farsamada gacanta, waxaan ugu sii soconaa si la mid ah sidii aan u maareeynay kormeeraha deegaanka
Talaabo talaabo ah oo leh sawiro la soo dejiyey
01 image: Waxa ugu horeeya ee aan sameyno waa abuurid a Xiriir Cusub ee Virt-Manager. Tan waxaan u daalacnaa Liiska -> + Ku dar isku xirnaanta ... ka dibna daaqad wadahadal ayaa furi doonta.
02 image: Daaqada wada hadalka halka aan ku cadeynayno qiimaha ugu muhiimsan ee xiriirka cusub ee aan dooneyno inaan dhisno:
Ku xir kumbuyuutarka fog Habka: SSH
Magaca isticmaale: xidid
Magaca kooxda: 10.10.10.5 (wali ma hayno) DNS)
Isku xirnaanta otomaatiga ah: waxay muujineysaa in markaan bilowno Maareeyaha-Virt-ka maxalliga ah, ay isku dayi doonto inay si toos ah ugu xirmaan hypervisor-ka fog. Waxaan soo jeedinaynaa ha calaamadin
URI"Aqoonsiga Labiska Dharka"la soo saaray: qemu + ssh: //root@10.10.10.5/system
03 image: Kadib markaad riixdid badhanka Ku xir talaabada hore, barnaamijka ssh-askpass na weydiinayaa, haddii aynaan weli xiriir samayn ssh fog fog, haddii aan rabno inaan sii wadno, taas oo aan ugu jawaabno «Haa»Waxaa lagu qoraa qoraal cad, xitaa haddii daaqadda wada hadalka aysan na tusin wixii aan qornay. Ka dib markaan si hufan uga jawaabno, waxaan gujinnaa badhanka OK
04 image: Daaqad wada hadal halkaas oo aan ku qoreyno lambarka sirta isticmaalaha xidid ee hypervisor-ka fog. Kadib markaad gasho, guji OK.
05 image: Maamulaha Virt-ka ee maxalliga ah wuxuu horeyba u muujinayaa labada xiriir: midka fog 10.10.10.5 (QEMU), iyo deegaanka maxalliga (QEMU). Hadda, iyo ilaalinta xiriirka fog ee la xushay, waxaan dhex marnaa Liiska -> Tafatir -> Faahfaahinta xiriirka, iyo dhammaan faahfaahinta xiriirka la soo xulay ayaa la soo bandhigi doonaa, mid xog leh iyo mid la qaabeyn karo.
06 image: IndhahaDib u eegid»Faahfaahinta isku xirka. Dhexdiisa ayaan ka akhrinay in xiriirku yahay qemu + ssh: //root@10.10.10.5/system. Magaca kooxda waa jessie.fromlinux.fan. Iyo faahfaahin kale oo ku saabsan xaddiga xusuusta, dhismaha, isticmaalka CPU iyo isticmaalka xusuusta ee hypervisor-ka fog.
07 image: IndhahaShabakadaha Fudud«. Halkaas ayaan ku aragnaa in shabakadda «Default"maahan Si toos ah u bilow marka aad bilaabeysid qalabka, in shabakadu tahay 192.168.122.0 / 24, kaas oo karti u leh oo leh xaddidan qeexan the DHCP, iyo taas Gudbinta waa iyada oo loo marayo NAT «Tarjumaadda Cinwaanka Shabakadda«.
Aynu halkan ku soo qaadanno qaamuus oo aan isweydiinno Sideen ugu beddeleynaa qaabeynta shabakadda aasaasiga ah xuduudaha lagama maarmaanka u ah shirkadda LAN?.
Waxaan bedelnaa shabakadda "default" ee shebekadda sare ee fog iyadoo la adeegsanayo virsh
Waxaan bilaabaynaa qalabka barato
[sudo] erayga sirta ah ee loogu dhawaaqo: Ku soo dhawow virsh, ee ah is-dhexgalka wax-ku-oolka. Nooca: 'caawimaad' caawimaad ku saabsan amarrada 'jooji' si aad u joojiso
Waxaan la xiriirnaa kooxda fog ee hypervisor jessie
virsh # ku xir qemu + ssh: //root@10.10.10.5/system
root@10.10.10.5 sirta ah:
Oo waxaan horeyba u galnay hypervisor-ka fog
virsh # liiska-net -oo dhan
Magaca Gobolka Autostart joogto ah ---------------------------------------------- ------------ asal ahaan firfircoonid la'aan maya haa
virsh # xogta net-netka ah
Magaca: default UUID: 18ce4bbb-fddb-4300-9f13-65b4d999690c Firfircoon: maya Joogto: haa
Waxaan ka heli qaabeynta soo socota ee ah cas Default. Ogow waxa lagu qeexay waa interface buundada network, oo maaha shabakadda lafteeda. Mashiin kasta oo aan dooneyno inaan ku xirno interface-ka gabdho0, waa inaad wadaagtaa isla shabakad.
virsh # net-edit-ka aasaasiga ah
ugu talagal 18ce4bbb-fddb-4300-9f13-65b4d999690c
Waxaan wax ka bedelnaa qaabeynta shabakadda Default ee hypervisor fog sida uu sheegayo shabakad hoose ee shirkadeena LAN, taas oo ah 192.168.10.0 / 24
ugu talagal 18ce4bbb-fddb-4300-9f13-65b4d999690cgabdho0'stp =' on 'daahid =' 0 '/>192.168.10.1'netmask =' 255.255.255.0 '>
Waxaan calaamadeyneynaa shabakada Default ee hypervisor-ka fog sidaa darteed is-abuurid
Bixiyaha shabakadda ayaa loo calaamadeeyay sidii dib loo bilaabay
Magaca: default UUID: 18ce4bbb-fddb-4300-9f13-65b4d999690c
Joogto ah: haa
Ugu dambayntiina waxaan bilaabaynaa shabakadda Default fog hypervisor
virsh # net-bilowga aasaasiga ah
Bixinta shabakada ayaa bilaabantay
virsh # liiska-net
Magaca Gobolka Autostart joogto ah ---------------------------------------------- ------------ default firfircoon haa haa
Wax ka beddelkaas kadib, waa inaan «Kala goynta"oo dib ugu noqo"Ku xir»Ku xirnaanta kumbuyuutarka fog ee Virt-Manager si aad u eegto isbeddelada.
Tallaabo Tallaabo Tallaabo oo wata sawirro la soo dejiyey
Sawirka 07a: IndhahaShabakadaha Fudud"oo leh Webka Default horay wax looga beddelay oo socda
08 image: IndhahaKaydinta»Laga soo bilaabo hypervisor-ka fog. Markii hore waxaan haysanaa Kaydinta Kaydinta oo keliya Default, oo waxay leedahay ikhtiyaarka ah Si toos ah u bilow. Haddii aynaan ku keydinaynin mashiinnada mashiinnada macmalka ah galka / var / lib / libvirt / sawirro sabab kasta ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad iska hubiso ikhtiyaarka Si toos ah u bilow. Daaqada wada hadalkan, waxaan gujinaynaa badhanka «+»In lagu daro keyd cusub oo lagu kaydiyo.
09 image: Waa kii ugu horreeyay ee saaxir ah inuu ku daro deebaaji cusub. Isaga magaca ee dhigaalka cusubi yahay jessie-vms-sawiro waana a Diiwaanka Nidaamka Faylka.
10 image: Maadaama aanu hayno 80GB disk ah oo ku rakiban / guriga / vms keydinta sawirada, waxaan cadeyneynaa in Wadada loo maro waxay noqon doontaa sida saxda ah.
11 image: Saaxirku markuu dhammaado, waxaan ku laaban doonnaa «Kaydinta»Waxaanan ogaanay in keydka cusubi uu hore u jiray, inuu soo guuriyey sawir CD ah oo loogu talagalay abuurista mashiinno casri ah, inay Firfircoon, oo waxaad leedahay ikhtiyaar Si toos ah u bilow la xushay Waxaan u abuurnay mug cusub mashiin cusub oo dalwad ah, adigoo gujinaya badhanka «Mug cusub«.
12 image: magaca ee mugga cusub waa samba-ad-dc, qaabkeeda qcow2 iyo iyada Awoodda ugu badan koritaanka firfircoon ayaa ah 15GB. Marka aan gudubno waxaan hubinaa in deebaajiga «jessie-vms-sawiro«, Awoodda la heli karo ka hor inta aan la abuurin mugga cusub, ayaa ah 77.95 GB. Si aan ugu dhammeyno abuurista mugga cusub, waxaan gujinnaa badhanka «Dhameystir«
13 image: Mar labaad waxaan ku laabaneynaa «Kaydinta»Waxaanan hubinaynaa in sawirka si sax ah loo abuuray. Haddii kale, waxaan wax ka beddeleynaa wax kale «Faahfaahinta isku xirka«, Sida xaalkeennu yahay, waxaan xirnaa daaqadda adoo gujinaya badhanka«X»Dhanka bidix ee kore, mana ahan xulashada menu-ka« Faylka », maxaa yeelay markaas Virt-Manager ayaa xiri doona waana inaan markale furtnaa. 😉
14 image: Waxaan hubinaa in iskuxirka lagu xushay Virt-Manager 10.10.10.5 (QEMU), maxaa yeelay waa meesha aan ka abuureyno mashiin dalwaddo cusub oo adeegsanaya kaaliyeheeda. Waxaan gujineynaa badhanka «Abuur mashiin cusub oo dalwad ah«, Ama waan dhoofnaa Liiska -> Faylka -> Mashiinka casriga ah ee cusub. Saaxirku waa la soo bandhigayaa oo daaqadda wada hadalka koowaad wuxuu muujinayaa in Xiriirintu waa 10.10.10.5 (QEMU / KVM), oo waxaan dooranay inaan ka abuuri doono mashiinka sawirka ISO ama CDROM.
15 image: Waxaan cadeyneynaa wadada sawirka ISO. Haddii aan riixno badhanka Si aad u sahamiso ... daaqad ayaa furan Soo hel mugga warbaahinta ISO, waxaan doorannaa deebaajiga jessie-vms-sawiro iyo dhexdeeda, illaa sawirka debian-8.0.0-amd64-CD-1.iso. Ka dib markii la xushay, dariiqa saxda ah ee sawirka ayaa la muujiyey /home/vms/debian-8.0.0-amd64-CD-1.iso. Mar dambe ayaan taas tilmaamnaa Nooca OS iyo iyada Nooca. Ugu dambayn waxaan gujinaynaa badhanka Adelante.
16 image: Sanduuqan wadahadalka waxaan ku muujineynaa tirada RAM) iyo xaddiga processor in aan siin doonno mashiinka farsamada, qadar aan macquul ahaan ka weynaan karin kan martida ama qalabka Hypervisor.
17 image: Marka lagu daro xulashada U oggolow keydinta mashiinkan dalwaddii ah, waxaan soo xulaynaa sawirka diskiga ee aan ugu xilsaareyno mashiinka, si la mid ah sida aan u doorano sawirka ISO Dhamaadka waxaan dooranaynaa mugga /home/vms/samba-ad-dc.qcow2.
18 image: Waxaan gaarnay dhamaadka saaxir. Waxaan muujineynaa in magaca del Guest waxay ahaan doontaa samba-ad-dc; maxaan rabnaa Ka-habeyn dejinta ka hor intaadan rakibin, oo aan u adeegsan doono isku xirka shirkadda LAN Shabakad ficil ah 'default': NATiyo Qeex cinwaan MAC oo taagan ee shabakadda shabakadda, oo si aan kala sooc lahayn loo soo saaray. Ilaa hadda mashiinka lama abuurin. Marka aan riixno badhanka Dhameystir, waa goorta la abuuri doono.
19 image: Daaqad na tuseysa sababta aan u dooranay Habee ka hor rakibidda. Sida caadiga ah, Maamulaha Virt-ka ayaa dooranaya La soco BILAASH BILAASH AH. Haddii aan dhibaatooyin xagga isgaarsiinta ah qabno ama aan soo bandhigno, waxaan isku dayi karnaa Server VNC Tan awgeed Monitor. Haddii aan beddelno cabbir kasta, waa inaan gujinnaa badhanka aplicar kheyraad kasta oo agab dalxiis ah. Haddii kale, Maamulaha Virt-ka ayaa ka cabanaya. 😉
20 imageSi la mid ah doorashadii hore, markay dhibaatooyin na soo wajaheen, waxaan isku daynay Fiidiyow ahaan Model VMVGA. Si aad u bilowdo rakibida cusub ee la abuuray Guest fog, waxaan gujineynaa badhanka «Bilow rakibo».
21 image: Kadib markii rakibida la bilaabay, iyo marwalba oo aan dooneyno inaan ku xirno mashiin fog oo dalwad ah ama Guest, Maamulaha Virt-ka ayaa markale na weydiin doona aqoonsiga isticmaalaha meel fog ku xirmay.
22 image: Ugu dambayntii waxaan ku bilaabaynaa rakibaadda Nidaamka Hawlgalka ee loogu talagalay martida fog, sida aan ugu qabanno mashiinka jireed ama server.
23 image: Maamulaha Virt-ka ee uu wato Martidu socda, mid maxalli ah iyo mid fog.
24 image: Mashiinka farsamada samba-ad-dc ficil ahaan.
Illaa iyo hadda, Tallaabo Tallaabo iyada oo loo marayo sawirro faallooyin ah, oo wali aniga ila muuqda inay yihiin habka ugu fiican ee noocan ah maqaalka. Shakhsi ahaan, waa wax aad ii xanaaq badan inaan u gudbiyo sawirrada oo aan akhriyo farriimaha u dhexeeya. Dabcan, haddii aad ka aqrinaysid boostada taleefannada casriga ah, waxaad doorbidi kartaa qaabkii hore. Ma aqaano, waxaa fiican inaan dhageysto ra'yigooda ku saabsan qaabka aan raacay.
Kuwo badan ayaa la yaabi doona haddii ay suurtagal tahay in lagu fuliyo dhammaan tallaabooyinkii hore iyada oo loo marayo aaladda caadiga ah, qunsulka amarka baratoiyo muuqaal-daawade. Jawaabtu waa haa. Waxa dhacaya waa inay noqon doonto boosteejo aad u dheer oo aad u farsamo badan, mana dooneyno inaan ka badbadinno akhristayaasha khibrad yar u leh Nidaamaynta.
Haddii akhriste kasta uu xiiseynayo sidee loogu sameeyaa virsh, fadlan nagala soo xiriir adoo maraya email.
Ma hubno inaan sii wadno Goobta Shaqada ee OpenSuSE o Xarunta Shaqada ee CentOS. Midkee doorataa?
Illaa xiisaha soo socda, sxb!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Maamulaha Virt-ka iyo Virsh: Maamulka fog ee loo maro Shabakadaha SSH - SMB
Adeeg wanaagsan oo aan soo helay si aan u sameeyo keydinta kuwa kumbuyuutareedka ku jira libvirt, tani waxoogaa ayay ku dhammaystiraysaa nidaamka deegaanka.
Salaan saaxiib Dhunter!. Horaanba u booqday bogga, qoraalka ayaa aad u abaabulan oo dhammaystiran. Waxaa haray oo kaliya in la waafajiyo qoraalka qoraalka baahideena, anoo ku dhawaaqaya "Defaults and constants" block, qiyamka lagu dabaqi karo kiis kasta. Waxaan siin doonaa isku day markaan haysto wakhti aan ku qaato. Sidoo kale, qoraalka fi-backup.sh waxay horay ugu jirtay nooca 2.1.0. Way fiicnaan laheyd haddii, haddii aad isku daydo, aad ii sheegto.
Aad ayey u xun tahay in faallooyin kooban laga bixiyo maqaalka tayada wanaagsan leh. Waxaan sugeynaa alaabooyinkaaga soo socda, Fico.
Maqaallo aad u wanaagsan kuwan, waxaan jeclaan lahaa inaad hadda ku sameyso CentOS. Taasi waa serverka aan ugu jeclahay distro iyo midka aan u isticmaalno Jaamacadda. Salaan ka timid Guatemala iyo sugitaanka maqaalka soo socda.
Cristian, dalabkaaga si dhakhso leh ayaa loo fulin doonaa. Waxaan horey u sheegnay inaan qori doonno waxyaabaha ku saabsan ganacsiga adag ee ku wajahan ganacsiga, CentOS iyo OpenSuSE. Ilaa hadda waxaan qorsheynayaa inaan ka sameysto desktop desktop CentOS iyo maqaal kale, sii wad rakibaadda Qemu + KVM iyo kuwa kale.
hello, markale, qoraal kale oo weyn oo kusaabsan kemu-kvm, laakiin hada laga eego aragti kale, maamul mareeg fog oo nooca kvm ah oo ka socota WK halkaas oo aan ku hayno qalabka maaraynta hypervisor maaraynta "Virt-Manager" iyadoo la adeegsanayo habka SSH iyo sidoo kale isticmaalka wiishka; Borotokoolka isku xirka "qemu + ssh: // user @ IP / system" waa mid aad u xiiso badan.
. aad u fiican in la beddelo qaabeynta shabakadda aasaasiga ah ee xuduudaha lagama maarmaanka u ah ganacsiga LAN iyada oo la adeegsanayo amarka virsh (runtii waan jeclaaday tusaalahan horumaray)
. iyo sidoo kale kaydinta Virt-Manager (abuurista ugu horreysa ee sawirka disk-ka ee qabsan doonta aag mustaqbal ah oo aan weli lagu abuurin hypervisor-ka fog; ugu dambayn isla Virt-Manager iyo isku xidhka sare ee sare ayaa abuuraya domain cusub.
Naxdinta sadarka ugu dambeeya «Qaar badan ayaa isweydiin doona haddii ay suurtagal tahay in lagu fuliyo dhammaan tallaabooyinkii hore iyada oo loo marayo konsolle caadi ah, qunsulka amarka virsh, iyo muuqaalka daawadayaasha. Jawaabtu waa haa. … »
Saaxiib, qoraal kasta oo cusub oo aad soo saartid joogsiga!
Maxay yihiin kormeerayaasha kale ee "fahmaya" Maamulaha Virt-ka (ie KVM)?
Mar labaad waad ku mahadsan tahay, saaxiib Wong, dhammaan fikradahaaga wanaagsan ee ku saabsan mowduuca Virtualization.
Dukumiinti ku saabsan Libvirt iyo Virsh oo ay la socdaan hypervisors kale:
"Libvirt 0-8-6 iyo Vmware Esx"
"Darawalka hypervisor VMware ESX"
"Sidee loogu ordaa Qemu & KVM ESXi?"
Waxaan ula jeedaa, waad ogaan doontaa taas libvirt iyo interface-ka ugu weyn barato si loo wado xirfad-yaqaanno 'hypervisors', waxay si fudud u yihiin BADAN. 😉